Displaying reviews 1 -5of 75 in total
အခန်းထဲမှာရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေထုက ခြောက်သွေ့နေသလို ခံစားနေရပြီလား...?
Humidifier တွေကို ရာသီဥတုခြောက်သွေ့တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ အဓိကအသုံးပြုကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အဲကွန်းအမြဲဖွင့်ထားတဲ့အခန်းတွေမှာဖြစ်စေ၊ ရာသီဥတုပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဖြစ်စေ အဲ့ဒီအခန်းထဲက လေထုကိုရှူရှိုက်လိုက်ရင် ခြောက်သွေ့သွေ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ခြောက်သွေ့တဲ့လူထုကို ရှူရှိုက်တာများလာရင် ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းခြောက်ခြင်း၊ နှာခေါင်းယားယခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့ခြင်း၊​ အိပ်နေရင် ဟောက်တတ်ခြင်း စတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ...
ရိုးရိုး TV တလုံးကို Android Smart TV တလုံးအဖြစ်ပြောင်းသုံးကြမယ်
Smart TV လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Xiaomi ရဲ့ Mi TV တွေကလည်း လူကြိုက်များတဲ့အထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ Xiaomi ဟာ Mi TV တွေအပြင် Mi TV Box/ Mi TV Stick လို့ခေါ်တဲ့ Devices တွေကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အလွယ်ပြောရရင်တော့ Mi TV Box တို့ Mi TV Stick တို့ဟာ သာမာန်ရိုးရိုး TV တွေကို Android Smart TV အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးကတော့ Mi Box ကိုမှ Global Version အဖြစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Mi Box S 4K ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Global Version ဖြစ်တာကြောင့် Google Apps တွေလည်း ပါဝင်ပြီးသာ...
အိပ်ယာခင်းနဲ့ Sofa ခုံတွေအသုံးပြုပြီး Allergy ဖြစ်သလို ခန္ဓာကိုယ်ယားယံတာမျိုးတွေဖြစ်နေပြီလား...?
Xiaomi ရဲ့ Mijia Wireless Mites Vacuum Cleaner လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အိပ်ယာခင်း၊ Sofa ခုံ၊ ကားအတွင်းပိုင်းတို့ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်တဲ့ ကြိုးမဲ့ဖုန်စုပ်စက် ဖြစ်ပြီး 850,000 rpm ရှိတဲ့ High-speed Motor ကို အသုံးပြုပေးထားပြီး 16kPa Suction ထိရှိတာမို့ စုပ်ယူမှုအားအတော်လေးကောင်းတယ်။ ဒါ့အပြင် Multi-vertex Cyclone Separation Technology ကိုအသုံးပြုထားပြီး Four-fold Filtration System ကြောင့် ဖုန်မှုန့်တွေအပြင် ပိုပြီးသေးငယ်တဲ့ 0.3 Microns အရွယ်အမှုန့်တွေကို 99.97% ထိစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ...
အထာကျကျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လွယ်သွားလို့ရတဲ့...
Xiaomi ရဲ့ လူငယ်ဆန်ဆန် ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ အထာကျကျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလွယ်သွားလို့ရတဲ့ Backpack လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အရောင်က Black နဲ့ Green ဆိုပြီး (၂) မျိုးဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး လူငယ်ဆန်ဆန်ဒီဇိုင်းနဲ့မို့ အပြင်သွားတဲ့အခါလွယ်သွားရင် လုံးဝစွဲဆောင်မှုရှိသလို Gym တွေဘာတွေ ကစားတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီ Xiaomi Small Backpack လေးရဲ့ Size က 10L ဖြစ်တာမို့ ပစ္စည်းထည့်ဖို့အတွက် နေရာကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလို့ရတယ်။ အလွယ်တကူ ရေမစိုနိုင်တဲ့ အသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာမို့ မတော်တဆ ရေစိုတာခံနိုင်သလို အ...
ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံး လုပ်မလား? ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခရီးသွားရင် သုံးမလား?
Xiaomi ရဲ့ Design လန်းပြီး လူကြိုက်များတဲ့ Backpack တွေထဲက Urban Life Style Backpack လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Model က ပထမဆုံးထုတ်ခဲ့တဲ့ Urban Life Style Backpack ရဲ့ တချို့လိုအပ်ချက်လေးတွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထည့်သွင်းပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Urban Life Style Backpack2ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Design ကလန်းတော့ အထာကျကျနဲ့ ရုံးတက်ရတဲ့သူတွေသုံးမလား? ကျောင်းသုံးအတွက်လည်း အဆင်ပြေသလို၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခရီးတိုလေးတွေထွက်တဲ့အခါမှာလည်း အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့...